नेताहरूलाई ट्युसन पढाउने कि ?
शनिबार पारेर घरमा फोन गरें। बहिनीले फोन उठाई। फोनको ब्याकग्राउन्डमा निकै हल्ला खल्ला आएको थियो। मैले सोधे शनिबार पनि क्याम्पस गइस् कि क्या हो? क्यामपस हैन ट्युसन पढ्ने ठाउँमा छु भनेर उत्तर दिई। ए बहिनीले त पैसा कमाउन पो थाली छे,म दंग भएं। टन्न पैसा कमाउने भइस् अब,प्रश्न सक्न नपाउँदै बहिनीले उत्तर दिई, ह्या कांहा कमाउने, पैसा तिरेर ट्युसन पढ्न आएको नि। म अवाक् भएँ,उ भने मास्टर डिग्री पढ्दै छ,स्कुल पढ्ने भुरा भूरि जसरी ट्युसन पढ्न पो जाने रही छे।
मास्टर्स पढ्नेको हालत देखेर दिक्क लाग्यो। भाइ कता छ,मैले कुरा मोडे। उ त बिध्धालय निरीक्षकको ट्युसन पढ्न गएको छ। मैले कुरा नबुझेको हो कि भने दोहोर्याए,ट्युसन की परीक्षा? बहिनी झर्किँदै भन्दैथी, ह्या के को परीक्षा हुने नि,परीक्षाको रुटीन निस्केकै छैन। ट्युसन पढ्न गएको हो,शनिबार शनिबार हुन्छ त्यसको क्लास। भयो त अब? ट्युसन पढेर निखारिएको निरीक्षकले खै के पो निरीक्षण गर्ने हो। मलाई उहिले मामाघरमा क्रिषी निरीक्षणमा आएको जे.टी.एको याद आयो। चौतारीमा बसेर गफको भरमा गाउँका सुन्तलाका बोटको मूल्याङ्कन गरेको थियो।पोहोर साल गाउँका अधिकांश
फेरी भेट्न मन लाग्छ, तिमीसंग छुटेपछि ।
आशा गर्छु भेट होला, पक्कै मौका जुटेपछि ।
बिदाइको हात तिम्रो, धेरैबेर हल्लीरह्यो,
लजालु मुहार तिम्रो, आखाँ भरि अल्झिरहृयो,
सबै रित्तो भएँछु म, मन तिम्ले लुटेपछि ।
आखाँभरि सपना हैन, तिमीमात्र आउँछौ सधैं,
के के केके भनिरहन्छौ, मायामात्र लाउँछौ सधैं,
छुट्ने वेला मन दुख्छ, सगै बसे उठेपछि ।
Posted by: mycreation Labels: गीत/ गजल/ कविता